Global Voices teny Malagasy » Sina: Ranomandry vita sinoa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Novambra 2009 2:50 GMT 1	 · Mpanoratra Michael Kan Nandika Candy
Sokajy: Shina, Siansa, Tontolo_iainana
Tamin'ny Alahady 1 Novambra lasa teo, nahita ny firotsahan'ny ranomandry lasa aloha indrindra tao anatin'ny 22 taona i Beijing. Ny fiovàn'ny toetr'andro tampoka, izay nandrakotra ranomandry ny tanàna manontolo, dia nahazendana mponina maro. Nefa taoriana kely dia nitatitra ny haino aman-jery  fa ny birao mpanova toetr'andro ao an-toerana no nanao an'iny fandrotsahana ranomandry iny.
Manan-tantara amin'ny fandrotsahana orana artifisialy i Sina, ampiasaina matetika hanakanana ny haintany. Indraindray kosa , mampihena ny rotsak'orana ny birao mpanova toetr'andro mba hampisava ny lanitra, ohatra hoe mandritra ny fetim-pirenena ny Oktobera na ny Lalao Olaimpikan'i Beijing.
Nizarazara ny hevitr'ireo mponin'ny aterineto momba iny ranomandry vitan'olombelona tamin'ny faran'ny herinandro lasa iny. Ny sasany dia nanoratra am-pifaliana ny hatsaràny, toa ilay mpitoraka blaogy, 鱼干儿 .
Ny sasany anefa sosotra. Nanoratra i 小米 ：
Tao amina forum iray amin'ny aterineto , nitaraina ny mpampiasa iray fa tokony nampiomana ny mponina mialoha ny governemanta, nanampy fa tsy maintsy nahemotra ny ankamaroan'ny sidina tao amin'ny seranam-piaramanidina.
Nisy lahatsoratra vitsivitsy tamin'ny aterineto koa naneho tahotra noho ny mety ho vokatr'izany ranomandry tsy tena izy izany amin'ny tontolo iainana. Mpitoraka blaogy iray, 天边的云 , nanontany tena raha misy olona manan-jo hanovaova ny toetr'andro.
Alex Pasternack, mpitoraka blaogy no sady mpanao gazety any Beijing, dia nanoratra lahatsoratra  tao amin'ny Tree Hugger mamelabelatra ireo mety ho vokatry ny rotsak'orana vitan'olombelona.
Nanao hanihany tamin'ity ranomandry ity ireo mpampiasa aterineto hafa. Nanoratra i Elizabeth Kain tao amin'ny blaoginy :
Nisy hevitra  iray hafa momba ilay ranomandry koa nanao fanamarihana mahatsikaiky:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/11/13/4059/
 haino aman-jery: http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2009/11/02/beijing-snow-man-made-in-china/
 Indraindray kosa: http://www.chinadaily.com.cn/2009-08/25/content_8616879.htm
 forum iray amin'ny aterineto: http://bbs.aigou.com/bbs/post/view/552_85446559_1__1_30.html
 Nisy hevitra: http://www.blogged.com/stories/law/beijing-snow-man-made-in-china